PressReader - Ilanga: 2018-02-12 - Baduve emakhaya ngenxa yesiphepho
Baduve emakhaya ngenxa yesiphepho
Ilanga - 2018-02-12 - Izindaba - PAMELA ZUNGU
BADUVE emakhaya abafundi baseMalahleni Primary School eMnambithi, maphakathi neKwaZulu-Natal, emuva kokuba lesi sikole sikhahlanyezwe yisivunguvungu esihambisana nemvula nokuduma kwezulu okushiye umonakalo omkhulu kule ndawo.
Lesi siphepho, esenzeke emasontweni amathathu edlule, sicekele phansi wonke amagumbi okufundela kanti abafundi bakhathazekile njengoba isikole sivaliwe.
Umzali, ocele ukuba igama lakhe lingadalulwa, utshele leli phephandaba ukuthi bakhathazekile ngekusasa lezingane zabo.
“Kasazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuba isikole silungiswe njengoba izingane zethu zihleli emakhaya zingafundi. Singajabula uma umnyango wezemfundo ungathatha abafundi ubafake kwezinye izikole ukuze bangasali ezifundweni,” kusho lo mzali.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Mlotshwa, uthe uzoxhumana nehhovisi lomnyango elisezingeni likamasipala mayelana nalolu daba.
“Umnyango uyalekelela ngamagumbi angomahamba nendlwana ezikoleni ezisuke zikhahlamezekile ukuze abafundi bezoqhubeka nokufunda,” kusho uMnu Mlotshwa.
Okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdaba KwaZulu-Natal - okuyi- wona obhekelele izinhlekelele - uMnu Msawakhe Mayisela, uthi umnyango wezemfundo yiwona okumele ubhekelele lesi simo.
“Umnyango wethu ubhekelela ikakhulukazi imiphakathi esuke ikhahlanyezwe iziphepho njengoba sisuke sinikela ngamatende, wukudla nozingubo zokulala. Ukube kuthiwa lesi siphepho senzeke kunabafundi emagunjini okufundela, besizongenelela,” kuchaza uMnu Mayisela.
AMEHLO akho ntombi angivusela usinga kwathi mangikwitize ngezilimi! Uma ngiwabheka ngivele ngibone izinkanyezi ezingamawele, uCaster noPollux! Lesi siphalaphala nguNonkanyiso Marabela (26), sidabuka eMount Fletcher, e-Eastern Cape. Itheleke kuleli likaMthaniya izothuthukisa imfundo yayo kanti iyamodela njengoba izoyomela iKwaZulu-Natal emncintiswaneni iMiss Eagle South Africa 2018 Brand Ambassador.
SISHIYE umonakalo omkhulu isiphepho eMalahleni Primary, eMnambithi, okuholele ekutheni abafundi baduve emakhaya.